Toa misy lesoka sasany amin'ny fidirana amin'ny Apple Music avy amin'ny HomePod nohavaozina amin'ny kinova 14.5 | Vaovao IPhone
Toa misy lesoka kely amin'ny fidirana amin'ny Apple Music avy amin'ny HomePod nohavaozina ho an'ny kinova 14.5
Toa mpampiasa vaovao nanavao ny azy ireo HomePod amin'ilay kinova rindrambaiko vaovao 14.5 izay manana olana izy ireo amin'ny filalaovan'i Siri hira ho azy ireo. Toy ny hoe tsy afaka mifandray amin'i Apple Music izy io.
Raha voamarina ity lesoka ity dia azonay antoka fa hanitsy azy haingana amin'ny alàlan'ny fanavaozana lozisialy vaovao i Apple. Ka raha iray amin'ireo mpampiasa mampalahelo ianao izay manana an'io olana io dia aza kivy fa hamboarina io tsy ho ela.
Miseho amin'ny tambajotran-tserasera samihafa ireo mpampiasa isan-karazany izay mitaraina momba ny olana iraisana: tsy afaka miditra ao ny HomePod Apple Music rehefa nohavaozina tamin'ilay rindrambaiko vaovao 14.5 tamin'ny herinandro lasa. Rehefa mampiasa "Hey Siri" hitendry hira na mpihira iray dia toa tsy ho hitanao ao amin'ny Apple Music ilay mpanampy manokana.
Ireo olana amin'ny Apple Music ao amin'ny HomePod ireo dia manatevin-daharana ireo olana hafa tamin'ny andro vitsy lasa izay. Ny talata amin'ity herinandro ity, serivisy isan-karazany an'ny iCloud tsy nihetsika ho an'ny mpampiasa sasany nandritra ny ora maro izy ireo. Ny herinandro lasa teo, zavatra mitovy amin'izany no nitranga tamin'ny iTunes sy Apple Music.
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy naneho hevitra momba io raharaha io i Apple. Afaka nampiasa ny mpampiasa sasany famerenan'ny orinasa ny HomePod anao dia voavaha ny olana.
Raha iray amin'ireo mijaly amin'ity lesoka ity ianao dia afaka mamaha izany hatrany amin'ny alàlan'ny fitendrena ny mozika tadiavinao mivantana avy amin'ny fampiharana Apple Music ao amin'ny iPhone, ary alefaso amin'ny alàlan'ny HomePod.
Ny olana dia tsy misy raha tsy miteny ianao Siri milalao hira mivantana ao amin'ny HomePod. Izany dia rehefa tsy afaka miditra amin'ny rindrambaiko Apple Music ilay fitaovana ary tsy afaka manatanteraka ny baiko.
Hiandry fanambarana avy amin'ny Apple, ary vahaolana haingana amin'ny endrika patch amin'ny kinova vaovao an'ny rindrambaiko fitaovana, izay hamaha ny olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » HomePod » Toa misy lesoka kely amin'ny fidirana amin'ny Apple Music avy amin'ny HomePod nohavaozina ho an'ny kinova 14.5
ASYRIANINA dia hoy izy:
Tara ianao. Izany dia vokatry ny fandefasana ny iOS 14.5.1 ho an'ny iphone, ary nisy fiatraikany tamin'ny homepods na apple tv. Izany dia nitranga tamin'ny andro 3. Tamin'ny andro faha-4 dia efa voavaha izany
Valiny ho an'ny Asyriana
Daniel P. dia hoy izy:
Iray amin'ireo tratry ny olana aho. Rehefa mangataka onjam-peo na hira misy ianao dia milaza fa tsy misy na inona na inona mifanaraka amin'ny Apple Music. Hiezaka hamerina sy hitatitra ny valiny eto aho.
Valiny tamin'i Daniel P.
AirTag vs Tile: iza amin'izy ireo no mila fotoana kely hahitana azy?
Otterbox dia manatevin-daharana kojakoja MagSafe ho an'ny iPhone 12